Ikhabethe le-Seven Springs - I-Airbnb
Ikhabethe le-Seven Springs
Wisconsin, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Tanya
Nethezeka nomndeni wonke kule ndawo enokuthula ongahlala kuyo.
Njengoba sibekwe phakathi kwamagquma nezigodi eningizimu-ntshonalanga ye-Wisconsin uzosithola kanye ne-wood coulee enhle. Uzozithola uhleli ngaphesheya komgwaqo wenhloko-dolobha yokudoba i-trout edume umhlaba wonke i-Coon Creek, imayela elingu-1 ukusuka ku-International Continental Ski Jumping Competition eba ngasekupheleni kukaJanuwari/ ekuqaleni kukaFebhuwari minyaka yonke. Imayela elilodwa ukusuka e-Westby Snowflake Ski and Golf Club enenkundla yegalofu eyi-9 hole kanye ne-clubhouse equkethe ibha kanye nokudla. Itholakala emigwaqweni yezimoto ezihamba eqhweni nasemgwaqweni womphakathi we-ATV/UTV. Imizuzu engama-30 ukusuka eMfuleni iMississippi. Inketho enhle yokuba yimfihlo futhi uzungezwe amagquma nezigodi ezinhle ezitholakala nxazonke ikhabethe lethu elihle. Itholakala ku-County Highway P phakathi kwe-Westby ne-Coon Valley, e-WI.
Ngaphakathi uzothola ikhishi eligcwele ngokugcwele kanye nezinsiza zokugezela. Sifaka ikamelo lokulala eliphambili elinombhede olingana nendlovukazi kanye nesitezi esiphezulu esinemibhede yosayizi ababili kanye nomatilasi we-queen size.
Ngaphandle uzothola umpheme onebhuloho phezu kweziphethu ezibukekayo namachibi. Uzothola nezihlalo ze-patio kanye nomgodi womlilo. Ngeke ufune ukuphuthelwa yileli gugu elincane lekhabethe. Woza uphumule, ujabulele futhi udlale ku-Timber Coulee enhle.